सर्वेन्द्रका आठ सफलता : सलाम सर्बेन्द्र ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
सर्वेन्द्रका आठ सफलता : सलाम सर्बेन्द्र !
 अस्मिता खड्का
नेपालले २३ वर्षपछि अन्तराष्ट्रिय फुटबलको उपाधि हात पारेपछि नेपाल लगायत विश्वभरका नेपालीहरुले महानगरीय अपराध महाशाखा एसएसपी सर्बेन्द्र खनालको प्रशंसा गरेका छन् । अझ खनाललाई बधाई दिनमा अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुको त ओइरो नै लागेको छ । अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जाल, समाचार, लेख र फोनमार्फत सर्वेन्द्र खनालको प्रशंसा गरेका छन् ।
न्युयोर्क निवासी संचारकर्मी सूर्य थापा आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन् – नेपाली फुटबल टोलीलाई बधाई छ । नेपाली फुटबलको कुरा गर्दा अब म्याच फिक्सिङ प्रकरणको तहस नहस पार्ने एसएसपी सर्वेन्द्र खनालको नाम सबैले गौरवका साथ सम्झने छन् ।’
त्यस्तै न्युयोर्क निवासी अर्का संचारकर्मी दिवाकर बागचन्द मिडियामा रमेश खरेलको चर्चा भएपनि वास्तविक हिरो भने सर्बेन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै फेसबुकमा लेख्छन् – ‘मिडियाको हिरो खरेल, वास्तविक हिरो खनाल । बधाई छ ।’ त्यसैगरी न्युयोर्क निवासी रेणु सुवेदीले आफ्नो फेसबुकमार्फत भन्छिन् – ‘बधाई सम्पूर्ण मिहिनेती फुटबल टिमलाई । साथै विशेष धन्यवाद एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई । हामी तपाईहरुप्रति गर्व गर्छौं ।’ न्युयोर्क निवासी अन्जन श्रेष्ठले नेपाली फुटबल टिमको विजयमा खुशी साट्दै लेखे – ‘ घुसले नबिगारेको भए हाम्रा फुटबल खेलाडीहरुले पनि ज्यान दिएरै खेल्दा रैछन् । अब अरु सरकारी घुसखोरलाई पनि समात्दै जेलमा जाक्यो भने देश पनि विस्तारै उँभो लाग्छ ।’
त्यस्तै सुरक्षा विषयका अध्येता एवं नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा जानकार न्युयोर्क निवासी राधाकृष्ण देउजा आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन् – ‘इमान्दारितासाथ देशको निम्ती खेल्ने हाम्रा फुटबल खेलाडीहरु पनि कम त रहेनछन नि । यस भन्दा पहिला पो गद्दारहरुको चंगुलमा परेको रहेछ त हाम्रो फुटबल । यस जीतको निम्ती नेपालको वर्तमान टिमलाई बधाई दिन जति आवश्यक छ त्यतिकै आवश्यक छ नेपाली फुटबल टिमका गद्दारहरुको पर्दाफास गर्ने महानगरीय प्रहरी अपराध माहाशाखाको सिंगो टिम अनि त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएका एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई । देश र जनताको इज्जत र प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढंगले खेलवाड गर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन एसएसपी खनाललाई अझै सफलता मिलोस, भ्रष्ट र गद्दारहरु नहुँदा फुटबलमा जसरी देशले गौरव गर्न सक्ने परिणाम आयो त्यस्तै परिणाम सर्वत्र आउंदै जाने अपेक्षा छ ।’
फुटवलको सौदाबाजी गर्ने संगठित अपराध विरुद्ध धाबा बोलेको केही समयमा नै नेपाली फुटवल खेलाडीले अन्तराष्ट्रिय खेलमा २३ वर्षपछि विजय हाँसिल गर्दा खेलाडीसंगै उनको प्रसंसा र चर्चा बढेको हो ।
गत शुक्रबार बंगालादेशमा भएको फाइनलमा बहराइनलाई ३ गोलको अन्तरले पराजित गर्दै बङबन्धु कप फुटबलको उपाधि नेपालले हात पारेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका वाल एसएसपी खनालको फोटोले भरिएका छन् ।
म्याच फिक्सिङको आरोपमा नेपाली फुटबल टोलीका कप्तानसहित आधा दर्जन खेलाडी पक्राउ परेकै कारण नेपाली टिमले उपाधि चुम्न सफल भएको ठहर अधिकांसले फेसबुक मार्फत व्यक्त गरेका छन् । यो २३ वर्षपछि नेपालले जितेको अन्तराष्ट्रिय फुटबल उपाधि हो । यसअघि नेपालले १९९३ मा साफ गेम्समा स्वर्ण जितेको थियो ।
केही दिन अगाडिमात्र एसएसपी सर्बेन्द्र खनाललाई महानायक राजेश हमालले सम्मान गर्दै खनाल प्रेरणाको स्रोत रहेको बताएका थिए ।
सर्बेन्द्र खनालले संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै भने– ‘म फुटबलको बच्चैदेखिको फ्यान हुँ । आज नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनले मेरो मिसन सफल भएको छ । म्याच फिक्सिङ भएको कुरालाई थप प्रमाणित गरिदिएको छ ।’
अब नेपालले कुनै दिन ‘विश्वकप’ खेल्छ – सर्बेन्द्र
म बच्चैदेखि फुटबलको फ्यान हुँ । पहिले पहिले एशियामा नेपाल भन्नै वित्तिकै फुटबलको देश भनेर चिनिन्थ्यो । हामी सबै नेपालीलाई फुटबलले एकत्रित बनाउँथ्यो । तर, पछिल्लो समय परिणाम असाध्यै कमजोर बन्यो । एक होइन् दुई होइन् सयौं खेलमा नेपाल लगातार असफल भयो । म आफै पनि फुटबलप्रेमी भएको नाताले पहिल्यैदेखि चिन्ता थियो तर, जब मैले जिम्मेवारी पाएँ, तब सोधखोज गर्दै गएँ । २३ वर्षसम्म नेपालको फुटबलको स्तर कसरी खस्कियो ? किन विग्रियो ? भन्ने कुरामा फोकस भएँ । सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गरेँ । एकपछि अर्काे कारण खुल्दै गयो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा फिक्सिङ हुने गरेको यथेष्ठ प्रमाण भेटिए । त्यसपछि फिक्सिङमा संलग्न खेलाडीलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्यौ । अनुसन्धानपछि प्रमाणित भयो कि नेपाली फुटबल पछाडि पर्नको कारण त म्याच फिक्सिङ रहेछ । यो घटनालाई आजको परिणामले पनि पुष्टि गरिदिएको छ ।
इमान्दारीपूर्वक खेलेको परिणाम अस्ति माल्दिभ्स र आज बहराइनसँग खेल्दा देखियो । अहिले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले जुन परिणाम देखायो, त्यो देखि म निकै खुसी छु । मेरो म्याच फिक्सिङ मिसन पूरै सफल भएको छ । यो जित खेलाडीले सही भावना, इमान्दारीकापूर्वक खेल्नुको परिणाम हो । जुनसुकै अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेल पनि देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । आजको जितले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई थप उचो बनाएको छ । खेलाडीको राम्रो प्रदर्शनले नै राष्ट्रियताको भावना बढाउँछ । अब नेपाली फुटबल यसै रफ्तारमा अगाडि बढ्छ र एकदिन विश्वकपकै उपाधि जित्न भन्ने मलाई विश्वास छ । नेपालका खेलाडीमा सम्भावना छ, प्रतिभा छ । यिनै कारणले गर्दा यो परिणाम देखिएको हो ।
यो जित सम्पूर्ण नेपालीहरुको जित हो । खेलको नाममा बदमासी गर्ने बदमासलाई कठघरामा ल्याउनुपर्छ । नेपालको झण्डा बेच्ने, नेपालीको भावनामा ठेस ल्याउने, राष्ट्रियता सौदा गर्नेलाई कदापी छोड्नुहुन्न् । अब हामी फुटबल प्रेमीले नेपाली फुटबललाई माथि पुर्याउन खेलाडीहरुलाई हौसला दिनुपर्छ र भविष्यमा विश्वमै खेल्ने सक्ने बनाउनुपर्छ ।
खेलको सौदाबाजी गर्ने आरोपमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान सागर विकास क्षेत्री, सन्दीप राई, रितेश थापा र अन्जन क्षेत्रीलाई खनालको टिमले कानुनको कटघरामा खाडा गर्यो । तर, खेलाडीहरु अहिले पनि भनिरहेका छन् हामी निर्दोष छौं । फुटबलको सौदाबाजी गर्ने आरोप लागेका मध्ये सागर र सन्दिप थ्रिस्टारका खेलाडी थिए । फुटबल खेलमा सौताबाजी भैरहेको गोप्य सूचना पाएका एसएसपी खनालले खेलाडीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको सुनाए ।
आरोपितलाई नियान्त्रणमा लिएपछि मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै भने ‘प्रहरीको लागि यो ऐतिहासिक सफलता मिलेको छ ।’ उनले झ्यालखान हालेका सबै खेलाडी अहिले धरौटीमा छुटेका छन् ।
देश बाहिर खेल हारेर आउँदा सौताबाजी भएको चर्चा बेला बेला हुने गरेको थियो तर,त्यसको चुरोकुरो पत्ता लगाउनका लागि उनी जिम्मेवारी समालेको वर्षदिन नपुग्दै सफल भए । खेलबाट देश विश्वमा चिनाउनुको सट्टा सौदाबाजी गर्नु पनि ठूलो अपराध भएको उनले भनेका छन् । खेलभित्रबाट भैरहेको संगठित अपराध रोक्न सफल खनालले राजनीतिको कभरभित्र लुकेका तस्कर, गुण्डा, व्यावाचारीलाई एकदिन काठमाडौंको सड्क पेटिमा उभ्याउने भनाइ अधिकारहरुको छ ।
म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका सागर २००९ देखि २०१५ सम्म कप्तानको जिम्मा समाल्दै आएका थिए । खनालको टीमले गरेको अनुसन्धानबाट बंगलादेश, मलेसिया र अफगानिस्तानमा भएका खेलमा सौदाबाजी भएको पत्ता लागेको छ ।
जनकपुर, पर्सा लगायतको स्थानमा बस्दा एसएसपी खनालले गुण्डागर्दी, तस्करी नियन्त्रण गर्दा धेरै पटक आफ्ने ज्यानसंग खोल्नु पर्यो । उनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रहरी संगठनका डिएसपीको घटुवा समेत गरेका थिए । उनले नेतृत्व समालेपछि माहासाखाले करिव डेढसय मुद्धामाथि सफल अप्रेसन गरिसकेको छ ।
प्रथम पटक प्रकाशित मिति : जनवरी २९, २०१६